Xubnihii Aqalka Sare u xilsaaray Xalinta Khilaafka D/gobaleedyada iyo D.Faderaalka oo soo gaaray Garoowe. – Puntlandtimes
Xubnihii Aqalka Sare u xilsaaray Xalinta Khilaafka D/gobaleedyada iyo D.Faderaalka oo soo gaaray Garoowe.
GAROOWE(P-TIMES) – Xubno katirsan Aqalka Sare ee Soomaaliya, loona xilsaaray arrimaha ku saabsan khilaafka u dhaxeeya Madaxda dawladda Faderaalka iyo dawlad gobaleedyada ayaa soo gaaray magaalada Garoowe, waxaana hogaaminayey Senator Cabdiraxmaan Maxamed Faroole oo horey Madaxweyne uga soo noqday Puntland.
Xubnahan waxay la kulmayaan Madaxweynaha Puntland oo ay kala hadlayaan khilaafkan iyo saameyta uu reebay, waxayna kaloo ka wada hadlayaan tabashada iyo sidda loogu baahan yahay in xal rasmi ah laga gaaro.
Dawladda Faderalka & Dawlad gobaleedyada ayaa isku khilaaf arrimo badan oo siyaasadeed, waxaana Aqalka Sare uu noqday cidda kaliya ee isku aragta in ay ka madax banaan tahay khilaafkan cusub, taas oo ay hadda xubnahan ugu soo direen dawlad gobaleedyada oo dhan.
Wafdiga Puntland soo gaaray waxay la kulmi doonaan Hay’addaha Fulinta, Sharci Dajinta & Garsoorka ee Puntland, waxayna kulamadooda ka dib warbixin ku celin doonaan Guddoonka Aqalka Sare ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho.
FAAHFAAHINTA LA SOCO GOOR DHAW